Wararka - Waa maxay kala soocidda iyo shaqooyinka baaldiyo
Maxay kala yihiin iyo shaqooyinka baaldiyo
Qod-jeexayaashu waxay ka shaqeeyaan munaasabado kala duwan waxayna dooran doonaan qalabyada kala duwan ee qalabka, qalabka caadiga ah sida baaldiyo, jajabiyaha, rippers, hawo-haweedka iyo wixii la mid ah. Kaliya xulashada qalabka saxda ah, waxaan ku heli karnaa xawaare sare iyo karti shaqo oo wax ku ool ah xaaladaha shaqo ee kala duwan. laakiin ma ogtahay? Xaaladaha kala duwan ee shaqada, waxaa jira in ka badan toban nooc oo baaldiyo godad ah, oo mid kastaaba leeyahay faa'iidooyin u gaar ah. Kuwa soo socdaa waa kuwa ugu badan ee baaldiyo qodista. Lahaanshaha iyaga ayaa hubaal kaa dhigi doonta Qalabka xitaa wuu ka awood badan yahay!
1. Baaldi caadi ah
Baaldiga caadiga ah waa baaldi caadi ah oo inta badan ku badan qotomayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Waxay isticmaashaa dhumucdiis saxanka caadiga ah, mana jiro hannaan xoojin oo muuqda oo ku saabsan jirka baaldiga. Astaamaha waa: baaldi wuxuu leeyahay awood balaaran, aag weyn oo afka ah, iyo dusha sare oo is dulsaar, sidaa darteed wuxuu leeyahay cunsur buuxsameysa, waxtarka shaqada oo sare, iyo qiimaha wax soo saarka oo hooseeya. Waxay ku habboon tahay bay'adaha shaqada ee fudud sida qodidda dhoobada guud iyo raridda ciidda, ciidda, iyo quruuruxa. Waxaa sidoo kale loo yaqaan baaldiga dhulka lagu dhaqo. Faa’iido darrooyinka jira: waxaa ugu wacan dhumucda yar ee saxanka, la’aanta tiknoolajiyadda xoojinta, sida taarikada wax lagu xoojiyo iyo taarikada la xidho, noloshu way gaaban tahay.
2. Adkee baaldiga
Baaldiga la xoojiyay waa baaldi isticmaala qalabka birta adkaysiga u leh ee xoogga badan si loo xoojiyo walwalka sare iyo qaybaha si fudud loo xirto ee asalka u ah baaldiga caadiga ah. Kaliya maahan inay dhaxasho dhammaan faa'iidooyinka baaldiga caadiga ah, laakiin sidoo kale wuxuu si weyn u hagaajiyaa xoogga iyo iska caabbinta. Nabaro iyo nolol dheer. Waxay ku habboon tahay hawlgallada culus sida qodista carrada adag, dhagaxyada jilicsan, quruuruxa iyo rarka quruurux.
3. Baaldi dhagax ah
Baaldiga dhagaxa qodaya wuxuu qaataa taarikada qaro weyn guud ahaan, isagoo ku daraya taarikada xoojinta hoose, isagoo ku daraya ilaalada dhinaca, ku rakibida taarikada ilaaliyaha, ilkaha baaldiga ee xoogga badan, oo ku habboon rarida dhagaxyada, dhagaxyada adag ee adag, dhagaxyada cimilada, dhagxaanta adag, qaraxyada macdanta , iwm. Jawiga hawlgalka culus. Waxaa si aad ah loogu adeegsadaa xaaladaha adag ee shaqada sida macdanta macdanta.
4. baaldi Mud
Baaldiga dhoobada qodda waxaa sidoo kale loo yaqaan baaldi qodaya. Ilko ma leh, ballaadhkiisuna waa ballaadhan yahay. Baaldi waxay aad ugu habboon tahay jarista dusha sare ee dhaadheer oo leh awood ballaaran, iyo qodidda wabiyada iyo boholaha.
5. Dagaal goos goos ah
Waxay ku habboon tahay qodidda qalabka dabacsan ee kala go'ay. Qodista iyo kala goynta ayaa lagu dhamayn karaa hal mar. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa degmada, beeraha, dhirta, dhowrista biyaha, iyo mashaariicda dhulka.
Ilkaha baaldi waxay kuxiranyihiin jawiga shaqada inta lagu gudajiro howsha isticmaalka si loo ogaado nooca gaarka ah ee ilkaha baaldi. Guud ahaan, ilka baaldi-madax-fidsan ayaa loo adeegsadaa qodista, ciidda cimilada, iyo dhuxusha. Ilkaha baaldi nooca RC ah ayaa loo isticmaalaa qodista dhagaxaan adag oo adag, Ilkaha baaldi nooca TL ahna guud ahaan waxaa loo isticmaalaa qoditaanka dhuxusha waaweyn. Ilkaha baaldi ee TL waxay kordhin karaan xaddiga wax soo saarka buro dhuxusha. Isticmaalka dhabta ah, dadka isticmaala badanaa waxay jecel yihiin nooca guud ee ilkaha baaldiga RC. Waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin noocyada ilkaha baaldi ee RC xaaladaha gaarka ah. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo ilka baaldi oo madax-madax ah, maxaa yeelay noocyada baaldi ee nooca RC waxay u kordhi doonaan sida "feedh" ka dib markay daalan yihiin in muddo ah. Caabbinta qodista ayaa yaraatay awooddiina waa la lumiyay. Ilkaha baaldi-fidsan ee afku had iyo jeer waxay ilaaliyaan dusha sare ee fiiqan inta lagu jiro habka xirashada, taas oo yareyneysa caabbinta qodista iyo keydinta shidaalka.
02. Ku beddel ilkaha baaldi waqtiga
Marka qaybta ugu dambaysa ee ilig baaldi ay si daran u xidhato, xoogga uu u baahan yahay qodigu inuu gooyo inta lagu guda jiro hawlgalka qodista ayaa si lama huraan ah loo kordhin doonaa, taas oo keenaysa in shidaal badan la isticmaalo oo saamayn ku yeelata waxtarka shaqada. Sidaa darteed, aad ayey lagama maarmaan u tahay in la beddelo ilkaha baaldi cusub ee waqtiga ku jira marka ilkaha baaldiga ay ka sii daran yihiin.
03. Ku beddel kursiga iliga waqtiga
Xirashada kursiga ilkaha ayaa sidoo kale aad muhiim ugu ah nolosha adeegga ilkaha baaldi ee qashin qodista. Waxaa lagugula talinayaa inaad bedesho kursiga ilkaha kadib 10% -15% kursiga ilkaha oo gaboobo, maxaa yeelay waxaa jira xaddi aad u tiro badan oo udhaxeeya kursiga ilkaha iyo ilkaha baaldiga. Farqiga weyn wuxuu beddelayaa taam ahaanta iyo culeyska culeyska ilig baaldi iyo kursiga ilkaha, ilig baaldikuna wuu jabayaa isbeddelka barta xoogga awgeed.
04. Kormeer maalinle ah iyo adkeyn
Shaqada dayactirka maalinlaha ah ee qodista, qaado 2 daqiiqo maalintii si aad u hubiso baaldiga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee kormeerku ka kooban yahay waa: heerka duugga baaldiga iyo haddii dildilaacyo jiraan. Haddii heerka xirashada uu daran yahay, xoojinta waa in la tixgeliyaa. Sida jirka baaldiga leh dildilaaca, waa in lagu hagaajiyaa alxanka waqtiga si looga fogaado kordhinta dhererka dildilaaca sababo la xiriira dayactirka dib u dhaca oo keenaya dayactir aan macquul aheyn. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad cagaha baaldi ku garaacdaa cagahaaga si aad u hubiso inay ilkuhu deggan yihiin iyo in kale. Haddii ilkuhu furfuran yihiin, waa in isla markiiba la adkeeyo.
05. Beddel booska ka dib xirashada
Tababbarku wuxuu caddeeyay in inta lagu jiro isticmaalka ilkaha baaldi godka, iligga ugu dambeeya baaldi uu 30% ka dheereeyo iligga hoose. Waxaa lagugula talinayaa inaad beddesho booska ilkaha gudaha iyo dibedda ka dib muddo isticmaalka.
06. fiiro gaar ah u yeelo habka wadista
Habka wadista darawalka qodda sidoo kale waa mid aad muhiim u ah hagaajinta isticmaalka ilkaha baaldiga. Darawalka qodda waa inuu isku dayaa inuusan dib ugalaaban baaldiga markii uu kor u qaadayo kor u kaca. Haddii darawalku kor uqaado bucshiradda inta uu kaxaysanayo baaldiga, hawlgalkani wuxuu noqonayaa Ilka baaldi waxaa soo foodsaaraya kor u qaadid xagga sare ah, sidaa darteed ilkaha baaldiga ayaa kala go'ay xagga sare, ilkaha baaldiina way kala dillaaceen. Hawlgalkani wuxuu u baahan yahay fiiro gaar ah isuduwidda ficilka. Qaar ka mid ah wadayaasha qod qubka badanaa waxay isticmaalaan xoog aad u fara badan ficilka balaarinta gacanta iyo dirista dhudhunka, waxayna si deg deg ah "u garaacaan" baaldiga dhagaxa weyn ama ku qasbaan baaldiga dhagaxa weyn, kaas oo jebin doona ilkaha baaldiga, ama Waa sahlan baaldi dillaac oo gacmaha ka dhaawac.
Darawalka qodista waa inuu fiiro gaar ah u yeeshaa xagal qodista inta lagu jiro hawlgalka. Marka ilkaha baaldi ay hoos u qodayaan si toos ah dusha shaqada, ama xagasha cambeerku uusan ka badnayn 120 digrii, si looga fogaado in la jebiyo ilkaha baaldiga iyadoo ay ugu wacan tahay xag-jirnimo xad dhaaf ah. Sidoo kale ka taxaddar inaadan u wareegin gacanta qodaya bidix iyo midig hoosta xaaladda iska caabin ballaaran, taas oo sababi doonta ilkaha baaldiga iyo kursiga marshadu inay jabaan sababtoo ah xoog badan oo bidix iyo midig ah, maxaa yeelay mabda'a qaabeynta farsamada ee moodooyinka badankood ilkaha baaldi ma tixgeliyaan xoogga bidix iyo midig. naqshad